Otú nyefee Audio akwụkwọ si na kọmputa na-iPhone enweghị iTunes | Nyefee Audio akwụkwọ sitere n'aka PC
"My iPhone na-synced na m iMac n'ụlọ. Ugbu a, m na njem na a MacBook Pro. M dị nnọọ zụtara ihe audiobook na Ịntanetị. Enwere m ike nyefee audiobook m iPhone enweghị iTunes. Ị mara, ma ọ bụrụ na ojiji iTunes, ọ ga-akwụsị music na vidiyo na m iPhone. Bụ n'ebe ọ bụla ngwọta? Biko nyere m aka-esi site this.Thanks! "
Ọ bụrụ na ị na-amasị onye ọrụ n'elu, mkpa nyefee ihe audiobook na iPhone enweghị na-eji ihe iTunes Library, mgbe ahụ ị na-kwesŽrŽ iji Wondershare TunesGo Ochie. Ọ bụ a ngwá ọrụ e mere maka iPhone ọrụ nyefee audiobooks site na kọmputa na-iPhone. Lee nzọụkwụ n'okpuru nyefee audiobooks ka iPhone na TunesGo Ochie.
Download ikpe mbipute maka Wondershare TunesGo Ochie nyefee audiobook ka iPhone!
Ke ibuotikọ emi, m na nyere gị ma ikpe mbipute nke TunesGo Ochie (Windows) na TunesGo Ochie (Mac). Na-ahọrọ nri dị ka gị na kọmputa sistemụ. Ma nke ha na-enwe ike nyefee audiobooks site na kọmputa na-iPhone. Na mgbe ị malite otu n'ime ha, ị pụrụ ịhụ otú iji ya. Ke ibuotikọ emi, m na-otú nyefee audiobooks na iPhone na Windows TunesGo Ochie ngwá ọrụ.
Nzọụkwụ 1. anakọta gị iPhone gị na kọmputa
Na-amalite na-ebufe, ihe mbụ na-eme bụ jikọọ gị iPhone gị na kọmputa. Biko adịghị eji Wi-Fi, ma gị iPhone eriri USB. Ẹkedori TunesGo Ochie ngwá ọrụ ozugbo mgbe echichi zuru ezu. Ọ ga-ahụ gị iPhone na-etinye ya na isi window.
Nzọụkwụ 2. Tinye audiobook ka iPhone
Pịa Media na n'aka ekpe nke isi window. Mgbe ịpị ya, ị pụrụ ịhụ, "Audiobooks" taabụ ke n'elu. Pịa ya ikpughe Audiobooks window. Si ebe a, pịa Tinye na họrọ "Tinye File" ma ọ bụ "Tinye nchekwa". Na mgbe ahụ na-agagharị na kọmputa gị maka audiobooks ị chọrọ iṅomi gị iPhone.
Na dị nnọọ a abụọ, ị ga-ahụ gị chọrọ audiobooks na-agafere iPhone. Na mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ige ntị na ha na ọ laa. Lee otú mfe ọ bụ idetuo audiobooks ka iPhone. E wezụga, i nwekwara ike iji TunesGo Ochie ngwá ọrụ ndabere audiobooks si iPhone na kọmputa.
Gbalịa TunesGo Ochie nyefee audiobooks ka iPhone ugbu a!
Soro Video Tutorial nyefee Audiobook site na kọmputa na-iPhone
> Resource> iPhone> otú nyefee Audiobook site na kọmputa na-iPhone enweghị iTunes